Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Burgers Chicken by Longo Hadda dib loo soo celiyay
Belmont Meat Products Ltd. waxay dib uga soo celinaysaa summada Longo's Chicken Burgers ee suuqa sababtoo ah waxaa ku jiri kara ukun aan lagu sheegin calaamadda. Dadka xasaasiyadda ku leh ukunta waa in aanay cunin alaabta dib loo soo celiyay ee hoos lagu sharaxay.
Alaabta soo socota ayaa lagu iibiyay Ontaariyo.
Badeecada la xasuusto
Longo's Burgerka Digaagga 852 g (6 x 142 g) 7 72468 03418 6 Ugu Wanaagsan Kahor 2022 MR 09 2022 MA 13 2022 JN 28
Haddii aad xasaasiyad ku leedahay ukunta, ha cunin badeecada dib loo soo celiyay sababtoo ah waxay keeni kartaa falcelin halis ah ama nafta halis gelisa.
Xusuus -qorkan waxaa kiciyay natiijooyinka baaritaanka Hay'adda Kormeerka Cuntada Kanada (CFIA). CFIA waxay samaynaysaa baaritaan badbaadada cuntada, taas oo laga yaabo inay keento in dib loo soo celiyo alaabtii kale. Haddii alaabta kale ee halista badan leh dib loo soo celiyo, CFIA waxay ku wargelin doontaa dadweynaha iyada oo loo marayo digniinaha Xusuus-qorka Cuntada.
Falcelin Ma jiraan wax falcelin ah oo la soo sheegay oo la xidhiidha isticmaalka boggan